China F4 Gate Valve kwemveliso kunye Factory | Hongbang
1 UMZIMBA GGG50 1
3 STEM I-SS416 1
4 I-GASKET EPDM 2
5 IBONNET U-DI 5
6 UKUHLALA Ubhedu 3
7 ORING EPDM 1
8 NUT Ubhedu
I-HYDROSTATIC 2.4 MPA 1.76 MPA
UMGANGATHO WOKUPHELA PN10 / 16
Ukuzala okupheleleyo kunye nokugcweleyo
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo engenasiphelo
Ductile esinqeni wedge EPDM camera
Akukho ndawo yokugcina
I-gasket yebhonethi ye-EPDM
Izikere ibhonethi ikhuselwe
Isangqa se-EPDM O kwisiqu
Ithuba lokutshintsha isiqu gasket phantsi koxinzelelo
Umbala we-epoxy RAL 5015 umbala 250 μm ubukhulu
Idyasi yothuli kwisiqu
Ubungakanani H C D U-L . C
Umgaqo wethu "kukuthembeka kuqala, eyona nto ilungileyo". Sinethemba lokukubonelela ngenkonzo ebalaseleyo kunye neemveliso ezifanelekileyo. Siyathemba ukuba singakwazi ukuseka win-win sisebenzisana nawe kwixesha elizayo!
Ubuchule bethu bobuchwephesha, inkonzo elungele abathengi, kunye neemveliso ezizodwa zisenza / igama lenkampani ukhetho lokuqala lwabathengi nabathengisi. Sijonge uphando lwakho. Masimise intsebenziswano ngoku!
Ukoneliseka kunye nekhredithi elungileyo kuye wonke umthengi yeyona nto iphambili kuthi. Sigxile kuzo zonke iinkcukacha zokwenza iodolo kubathengi de bafumane iimveliso ezikhuselekileyo nezisandi ngenkonzo elungileyo yokuhamba kunye neendleko zoqoqosho.
Ukubambelela kumgaqo "wokuKhangela kunye nokuKhangela iNyaniso, ukuChaneka kunye noManyano", kunye netekhnoloji njengeyona nto iphambili, inkampani yethu iyaqhubeka nokwenza izinto ezintsha, izinikezele ekuboneleleni ngeyona mveliso ineendleko eziphezulu kunye nenkonzo ebambekayo yasemva kokuthengisa. Siyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba: sibalasele njengoko sikhethekile.
Egqithileyo Knife Gate Valve
Okulandelayo: F5 Isango Valve